ထမင်းပူပူ၊ ဟင်းပူပူက စားလို့မြိန်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း နွှေးစားလို့ မသင့်တော်တဲ့ ဟင်းလျာတွေ၊ အစားအစာတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား? ဟုတ်ပါတယ်နော်။ တချို့အရာတွေက ပြန်နွှေးလိုက်ရင် ဗီတာမင်နဲ့အာဟာရတွေ…
Allergies တွေက စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေသလား?
ဂျာမနီ နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်က သုတေသီများက စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ကြောင်းကြမှု နဲ့ Allergy ဖြစ်ပေါ်ခြင်းက ဆက်စပ်နေနိုင်လားဆိုတဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အခြေ လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့…
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဆီးချိုရောဂါကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ စစ်ဆေးဖို့ လူတွေက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးက ဆီးချိုးရောဂါ ကာကွယ်နေတဲ့သူတွေကို Devices တွေ အသုံးမပြုဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင်…
Green juice ဆိုတာဘာလဲ? အရင်ဆုံးဘာလဲဆိုတာမရှင်းပြခင် Green juice ဟာ ဝိတ်ကျစေတယ်လို့ လူအများထင်မြင်ယူဆလေ့ရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ် ! ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးပါပဲ။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းအပင်ပေါက်ကနေ Schizophrenia ရောဂါကုသနိုင်တော့မယ်
လတ်တလောပြောကြားခဲ့တဲ့ ဂျွန်ဟုတ်(ပ်)ကင်း သုတေသနပြုသုများရဲ့ အဆိုအရ Schizophrenia လိုမျိုး စိတ်ကစဥ့်ကလျားဖြစ်သူတွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေမှာရှိတဲ့ ဓာတုဗေဒဓာတ်မညီမျှမှုတွေကို Broccoli လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းရဲ့ အပင်ပေါက်အညှောင့် က ကွန်ပေါင်းဓာတ်တွေက…